Ben’ny tanànan’Ambavahaditokana Miantso ny mpitandro ny filaminana tsy ho variana amin’ny COVID 19
Saika any amin’ny ady amin’ny coronavirus avokoa na ny COVID 19 no mitodika ankehitriny ny mpitandro ny filaminana.
Na izany aza anefa dia tsy azo hamaivanina ihany koa ny asa tena hiandraiketan’izy ireny dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Manoloana izany tranga izany dia manao antso avo amin’izy ireny ny Ben’ny tananan’ny kaominina Ambavahaditokana Ratoetrarinanja Jean Louis. Ny samy vahoaka madinika ihany mantsy raha araka ny fanazavany no mifanamboatra amin’izao noho ny hasarotan’ny fiainana. Ho an’ny kaominina izay tantanany manokana dia nomarihiny fa nirongatra ny hala-botry tato ho ato. Samy miezaka mitady izay harotsany avokoa mantsy ny isan-tokantrano noho ny tsy fisian’ny asa raha misy ihany koa ireo niasa ihany fa voaraoka mihitsy ka tsy mahita izay hiantsapazana intsony. Na izany aza anefa hoy hatrany ity Ben’ny tanana iray ity dia mbola tsy nisy ny fanafihana mitam-piadiana na vono olona nitranga hatreto tao amin’ny faritra iadidiany hatramin’ny nahavoafidy azy ho Ben’ny tanana.